Moments leh saaxiibo 6
Markaad ka hadashid nalalka asxaabta saaxiib Maxay tahay macnaha saxda ah ee ereyga, oo loo isticmaalo isku xirnaansho aad u badan oo ay ka mid yihiin muusikada iyo maqaayadaha?
Hantidu waa qeyb ka hooseeya heerka qofka; Jirka jirka oo ka kooban mid ka mid ah afarta qaybood. Sidaa awgeed ereyga hoose. macnaha ama ka mid ahaanshaha walxaha. Fikradaha saxaafada ee loo yaqaano Rosicrucians ayaa u kala qaybiyay halbeegyo afar fasal ah, oo la xidhiidha mid kasta oo ka mid ah afarta qaybood oo lagu daweeyo iyaga oo ah dhulka, biyaha, hawada, iyo dabka. Dabcan waa in la xasuusto in waxyaabahan aysan isku mid ahayn sida xubnahayaga guud. Dunida, tusaale ahaan, ma aha waxa aan arkayno nagu wareegsan, laakiin qaybta aasaasiga ah ee dhulkayagu adag yahay. Rosicrucian ayaa loo magacaabay aasaaska dhulka, gnomes; kuwa biyaha ku jira, kuwa ka mid ah hawada, hawada, nidaamka; iyo kuwa dabka, salamander. Mar kasta oo qayb ka mid ah qodobbada la siiyo jihada fikirka aadka u ba'an ee bini aadamka, fikraddani waxay qaadataa qaabkeeda qaabdhismeedka astaamaha dabiiciga ah waxayna u muuqaneysaa sida ka mid ah qaybta ka soo jeeda, laakiin jidhkeedu wuxuu ka kooban yahay. Kuwani oo aan abuurin fikirka bani-aadmiga ee xilligan qaab-dhismeedku waxay ku fashilmeen inay noqdaan, iyada oo ay ugu wacan tahay aragtiyihii hore ee horumarinta. Abuuridda aasaasiga ah waxaa sabab u ah maskaxda, bini-aadanka ama caalamka. Qeybaha aasaasiga ah ee loo yaqaano aasaaska dhulka ayaa ah kuwo ka kooban toddoba fasal, waana kuwa ku nool tuulooyinka iyo buuraha, miinooyinka iyo dhulka oo dhan. Kuwaasu waa kuwa dhulka dhisay, wayna macbudka ku kor yaal. Xuubayaasha ayaa ku nool ilaha, webiyada, badaha, iyo qoyaanka hawada, laakiin waxay qaadataa isku-darka biyaha, hawada iyo dabka si ay u soo saaraan roob. Guud ahaan waxa ay qaadataa isku-dar ah laba ama in ka badan oo ah elemental ah si ay u soo saaraan waxkasta oo dabiici ah. Sidaa daraadeed kristantirrada waxaa abuuraya isku-darka dhulka, hawada, biyaha, iyo dabka. Sidaas awgeed waa dhagaxyo qaali ah. Dhibaatadu waxay ku nool yihiin hawada, geedaha, ubaxyada beeraha, geedaha, iyo dhammaan boqortooyada qudaarta. Salamiyiintu waa dabka. Ololku wuxuu soo galayaa jiritaanka iyadoo la joogayo salamander. Dabka ayaa ka dhigaya salamander muuqata. Marka uu jiro olol waxaan ku aragnaa qayb ka mid ah salamander. Heerarka dabku waa kuwa ugu caansan. Afartaani waxay isku daraan si ay u soo saaraan dab, duufaan, daadad, iyo dhulgariir.
Maxaa loola jeedaa 'asalka aadanaha'? Ma jiraan wax farqi ah oo u dhaxeeya isaga iyo maskaxda hoose?
Nidaamka aadanaha ayaa ah in cidda ay la xiriirto markii uu markii hore soo galo oo uu la socdo mid kasta oo jidhka ka soo baxa dhismaha jidhkiisa. Waxay ku sii jirtaa dhammaan jeexjeexyada maskaxda illaa, iyada oo loo maro ururada dheer ee maskaxda, waxay helayaan mareenka ama riixitaanka miyir-beelka. Ma ahan wax sii dheeraan karo, laakiin maskaxda hoose. Laga soo bilaabo aasaasiga aadanaha wuxuu yimaadaa linga sharira. Qeybta aadanaha waa Madame Blavatsky's "Secret Doctrine" oo loogu yeero "bharishad pitri", ama "aabaha lunar," halka ninka, Ego, uu ka mid yahay agnishwatta pitri, oo ah qorraxda qoraxda, wiilka Sun.
Miyuu jiraa xakamaynta asalka ah ee rabitaanada, kale oo xakameynaya xoogga muhiimka ah, kantaroolida shaqooyinka jidhka, ama maareynta asalka aadanaha oo dhan?
Waxyaalahaas oo dhan ayaa xakamaynaya asaasiga aadanaha. Linga sharira waa automaton kaas oo fuliya rabitaanka asaasiga aadanaha. Pitri biskishad kuma dhimanayo geerida jidhka, sida linga sharira. Linga sharira, cunugeeda, waxaa laga soo saaraa iyada oo loo marayo dhar kasta. Barkishad waa hooyada kaas oo ka shaqeynaya maskaxda reincarnating ama Ego, iyo ficilkan waxaa loo soo saaray linga sharira. Xakameynta asalka aadanaha ee dhammaan hawlaha lagu sheegay su'aasha, laakiin hawl kasta waxaa lagu fuliyaa arrin gaar ah. Xubin kasta oo jidhka ka mid ah wuxuu ogyahay oo uu xukumayaa oo kaliya noloshii udheerta xubinta, oo qabatid shaqadeeda, laakiin waxba kama taro shaqa kasta oo kale, laakiin asalka aadanaha wuxuu arkaa in dhammaan hawlahaas la fulinayo iyo xiriir la leh midba midka kale si isku mid ah. Dhammaan falalka aan ikhtiyaariga ahayn ee jirka sida neefsashada, dheef-shiidka, dhedhexaadinta, dhammaantood waxaa xakamaynaya asaasiga aadanaha. Tani waa hawlaha budhcadda ee jidhka jirka ee asalka aadanaha. In Qoraalka "Miyir-qabka," Ereyga, Vol. Aniga, bogga 293, waxaa la yiri: "Xaaladda shanaad ee arrinta waa maskaxda bini'aadamka ama aniga-aniga. Marka la eego da'da tirooyinka aan la tirin karin, atomiga aan la dabooli karin oo horseeday jajabyo kale oo macdanta ah, iyada oo loo marayo khudradda, iyo xayawaankaba, ugu dambeyntii waxay gaadhay xaaladda sare ee arimaha taas oo ka muuqata mid miyir-qabka ah. Inaad noqoto qof shaqsi ah oo leh muraayadda miyir-qabka dhexdiisa, waxa uu u fakarayaa oo wuxuu iska hadlaa naftiisa oo kale, maxaa yeelay waxaan calaamad u yahay Midda. Bini'aadamku wuxuu ku hoos jiraa hoggaankiisa xayawaan jidheed. Xayawaanku wuxuu kicinayaa mid kasta oo ka mid ah xubnihiisa si ay u qabtaan hawl gaar ah. Cid kasta oo ka mid ah xubnuhu waxay ku hageysaa mid kasta oo unugeeda ah si uu u sameeyo shaqo gaar ah. Nolosha cell kasta waxay hoggaamisaa mid kasta oo ka mid ah molecules si kor loogu qaado. Naqshadeynta mid kasta oo ka mid ah maadi-yad kasta wuxuu isku xiraa mid kasta oo ka mid ah asalkiisa si habsami ah, iyo Miyir-beelku wuxuu ku raaxeeyaa mid kasta atomka iyadoo ujeedadu noqonayso is-miyir. Atomyada, molecules, unugyada, xubnaha, iyo xayawaanka, dhammaantood waxay ku socdaan jihada maskaxda - xaalad is-miyir-qab ah oo u taagan-u shaqeynaya taas. Hase yeeshee, maskaxdu ma gaadhsiiso is-miyir, taas oo ah horumarinteeda dhamaystiran, ilaa ay hoos u dhigto oo ay xakamayso dhammaan rabitaannada iyo riyooyinka laga helay dareennada, oo waxay ujireen fikradaha ku saabsan miyir-qabka sida laftiisu ka muuqato. "Bharishad waa nafta nalka jidhka oo kaliya sida agnishwatta pitri waa nafta nalka niyadda. "Miyuu jiraa kantaroolid asalka ah ee rabitaanka?" Maya, rupa waxay u dhigantaa xiriir la mid ah Ego sida linga Sharira ujeedada aadanaha. Kaliya halka linga sharira waa automaton jidhka, gawaarida waa automaton ee rabitaanka xooggan ee adduunka oo dhan. Aragtida adduunku waxay u dhaqaaqeysaa rupa. Dhamaan walxaha udubdhexaadka ah ee rerka ah. Sidaas awgeed, linga Sharira waa la riixay, jidhkuna wuxuu u guuraa sida dareenka ama amarrada asalka aadanaha, gawaarida, ama Ego.
Miyuu xakamaynayaa xajinta asaasiga ah ee ficillada miyir-qabka iyo shaqooyinka miyir la'aanta jirka?
Ma jiraan wax la mid ah hawlaha miyir la'aanta ah ama ficil. Inkasta oo bini'aadamku aanay ka warqabin hawlaha ama ficilada jidhkeeda, waxay udub-dhexaad u tahay xubin ama ficil ahaanba waa mid miyir-beel ah, haddii kale ma shaqeyn karo. Isla asalka ah mar walba ma sameeyo dhamaan hawlaha ama falalka jirka. Tusaale ahaan, asaasiga aadanaha wuxuu u madaxbanaan yahay jirka oo dhan, inkastoo uusan ka warqabin tallaabada gaarka ah iyo midda shaqsiyadeed ee dhiigga gaduudan.
Miyuu yahay mid ka mid ah qaybaha guud ee isbeddelka, oo dhammaantood ama midkoodna miyuu ku jiraa habka horumarintu noqdaan rag?
Jawaabtu waa haa tahay labada su'aaloodba. Jirka qofka ayaa ah guriga iskuulka oo dhan. In jidhka nin dhan fasal kasta oo elemental ah waxay helayaan casharradooda iyo waxbarashadooda; iyo jidhka ninku waa jaamacad weyn oo laga soo gaabiyay dhammaan heerarka aasaasiga ah siday u qalanjabiyaan. Qeybta bani-aadmigu waxay qaadataa heerka is-miyir-qabka iyo markaa ka dib, sida Ego, u hoggaansamayso erey kale oo noqonaya bini-aadan, iyo dhammaan qaybaha hoose, xitaa sida Ego ee jirku hadda sameeyo.